Gurmuu Hawaasa Oromoo – Page 2 – Gurmuu-Oromo community in Sweden/Oromo Förening i Sverige
Hennes & Mauritz (HM)satsar i diktatur
On November 10, 2014 November 12, 2014 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
HM kritiseras nu för sin satsning i diktaturen Etiopien, bland annat av människorätts- organisationen Human Rights Watch. Företaget sammarbetar med en shejk i Etiopien som anlagas för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. KLIPP
On October 28, 2014 October 28, 2014 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Ayyanni Irreecha Oromiyaa/Bishooftuti kabajame
On October 6, 2014 October 8, 2014 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Onkololeessa 5, 2014 ayyaanni Irreechaa Hora Arsaditti kabajame.
VIDEO1-Irreecha bara 2014
VIDEO2-Irreecha bara 2014
On September 14, 2014 September 15, 2014 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Fulbaana 13, 2014, hawaasni oromoo biyyaa Sweden magaala Stockholm keessatti qophii kabaja ayyaana Irreechaa fi qophii gargaarsa Oromia Media Network (OMN) haala bareedan gaggeessan jiru. Qophii kana irratti hawaasni oromoo Sweden, Norway, fi Denmark irraa baaynaan irratti hirmatani jiru. Qophiin Ayyaanni Irreechaa, magalaa gudditti Sweden, Stockholm baka Lötsjö (Sundbyberge) jedhamutti sa’a 10:30 hanga 12:30 kan gaggeeffame yoo ta’u, itti aansudhaan aada Irreechaa fi barbaachisumaa aada oromoo guddisuu ilaalchisee, akkasumaas barbaachisumaa jarmiyaa haawaasa oromoo ilaalchisee barumsi fi mariin baldhaan gaggeeffame jira. Qophii kana irratti baachisummaa miidiyaa cimaa fi haala OMN ilaalchisee ibsi kennamee jira. Qophii kana milkeessudhaaf dubartoonni oromoo Stockholm jiran hirmaannaa guddaa godhani jiru. Qophii kana irraa galiin argamee hundi OMN akka oolu kan godhame yoo ta’u dabalataan OMN jabeesudhaaf hawaasni deeggarsa addaa godhee jira. Galgala guyyaa kanaa, Artist Hayluu Kitaabaa hawaasa gammachiisudhaan qophiin kun daran akka bareedu godhee jira. Dabalata…